ဤစာမျက်နှာကို sarcoidosis အကြောင်းကိုယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ sarcoidosis ၏တိကျသောအမျိုးအစားများအပေါ်သိရှိလိုပါကအထက်တွင် menu ကိုအသုံးပြုပါ။ sarcoidosis အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိစ္စတွင်မူထူးခြားတဲ့ဖြစ်တယ်, သင်အမြဲသင့်ရဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသက်သေအထောက်အထားအပေါ်အခြေခံသည်ပေမယ့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်တစ်ခုအစားထိုးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားမရသင့်ပါတယ်။
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကို sarcoidosis အထူးကု၏အကူအညီဖြင့်ရေးသားပြုစုထားသည် ဒေါက်တာကေ Bechman နှင့် ဒေါက်တာဂျေ Galloway, ဒူထာဗေဒ, ဓမ္မရာဇဝင်ကောလိပ်ဆေးရုံမှ, လန်ဒန်။
Sarcoidosis granuloma ကိုခေါ်ဖုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များမှာဖွံ့ဖြိုးတဲ့အခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား granuloma ရောင်ရမ်းခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆဲလ်တွေပြွတ်၏ဖွင့်ထားကြပါတယ်။ တစ်ဦးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအတွက်ဆိုပါကအများအပြား granuloma ပုံစံတစ်ခုကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်မှကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ Sarcoidosis ခန္ဓာကိုယ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏအဆုတ်အပေါ်သက်ရောက်မှုဒါပေမယ့်လည်းအရေပြား, မျက်စိ, အဆစ်, ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်, နှလုံးနှင့်အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က menu bar ထဲကပေါ် '' ပြန်ကြားရေး 'အောက်က drop-down menu ကနေသက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် sarcoidosis အမျိုးမျိုးအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များဖတ်ရှုပါ။
အဘယ်သူသည် Sarcoidosis ဖွံ့ဖြိုး?
Sarcoidosis မကြာခဏအခြားအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ရောဂါရှာဖွေမှုမှားယွင်းခြင်းနှင့်အခြေအနေကိုနှင့်အတူအသက်ရှင်လူမည်မျှအကြောင်းကိုသဘောထားကွဲလွဲရှိ၏။ သို့သော်ကျနော်တို့ sarcoidosis ရှားပါးကြောင်းကိုငါသိ၏။ အများစုမှာအထူးကုန်းကျင် 1 ခပ်သိမ်းသောလူ 10,000 အတွက်ဗြိတိန်တွင် sarcoidosis ရှိသည်သောသဘောတူသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအင်္ဂလန်အတွက် 3000 ခန့် 4000 လူတွေကို sarcoidosis နှင့်အတူကုသပေးလျက်ရှိသည်။
Sarcoidosis နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့အဖြစ်အားလုံးအဓိကတိုင်းရင်းသားထဲမှာပြံ့နှံ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးအနည်းငယ်ပိုမိုပျံ့နှံ့ကြောင်းအကြံပြုအချို့သောသုတေသနရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနနဲ့သဘောတူ - SarcoidosisUK ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းစစ်တမ်းများတွင်ဖြေဆိုသူ 69% အမျိုးသမီးခဲ့ကြသည်နှင့် 31% အထီးခဲ့ကြသည် (7,002 သင်တန်းသားများကို။ )
Sarcoidosis မဆိုအသက်အရွယ်မှာဖြစ်ပေါ်ပေမယ့်အများအားဖြင့်၎င်းတို့၏အသက် 30 သို့မဟုတ် 40 အတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအပေါ်သက်ရောက်မှုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းစစ်တမ်းများတွင်ထားသော 4,833 တစ်ဦးချင်းစီကိုအမိမိတို့၏အသက်အရွယ်ကိုပြောသည်။ အဆိုပါဒေတာ sarcoidosis အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွင်းပျံ့နှံ့ကြောင်းညွှန်ပြ - ပျမ်းမျှအသက်အရွယ် 50. ခဲ့အစီရင်ခံဖြစ်ပွားမှု၏ 80% ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ 37 အကြားနှင့် 65 (ဤရောဂါမှာအသက်အရွယ်မရွေးပေမယ့်အစီရင်ခံစာအချိန်ပေးအသက်အရွယ်မဟုတျပါ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ )
မကြာခဏကိုးကား အမေရိကန်သုတေသန အာဖရိကနှင့်စကင်ဒီနေးအမွေအနှစ်လူမျိုးဗီဇဒြပ်စင်ခဲ့ရသည်, ထိုအခွအေနေနဲ့စာချုပ်ချုပ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။
Sarcoidosis အကြောင်း Read More ...
Sarcoidosis အမေးအဖြေများ - ထို SarcoidosisUK သူနာပြုများ, လူနာများနှင့်အထူးကုအတိုင်ပင်ခံများ၏အကူအညီဖြင့် SarcoidosisUK ခြင်းဖြင့်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Sarcoidosis တစ်ခု Excellent ကပညာရေးဆိုင်ရာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းရောဂါပေါ် EULAR ဖတ်စာအုပ်, (2015), အခန်း 18, ပုဒ်မ 2, စာမျက်နှာ 493. (EULAR ၏ပေးယဉျကြေး: အသွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီး EULAR က်ဘ်ဆိုက် မြေတပြင်လုံးအခနျးတှငျဖတျရှု။ )
Sarcoidosis ဘို့စိတ်ရှည်သတင်းအချက်အလက်ဗြိတိသျှ Thoratic လူ့အဖွဲ့အစည်း, Thorax (2008); 63, ဖြည့်စွက် V.
အဆိုပါစကားလုံး "sarcoidosis" ဂရိကနေကြွလာ sarcο- အဆိုပါနောက်ဆက် "ဇာတိပကတိအားဖြင့်" အဓိပ်ပာယျ - (င) Ido "အကြံအစည်" အဓိပ္ပာယ်နှင့် -sisတစ်ဘုံနောက်ဆက်ဂရိအဓိပ်ပာယျ "အခွအေနေ" ။ အရှင်တပြင်လုံးကိုစကားလုံး "ရေနံစိမ်းဇာတိပကတိအားဖြင့်ဆင်တူတဲ့အခွအေနေ" ကိုဆိုလိုသည်။
Sarcoidosis ပထမဦးဆုံးအနီ, ကြီးပြင်းမျက်နှာပေါ်မှာအဖု, လက်နက်နှင့်လက်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့တစ်ခွအေနအေအဖြစ်အင်္ဂလိပ်အရေပြားအထူးကုဆရာဒေါက်တာဂျော်နသန် Hutchinson နေဖြင့် 1877 တှငျဖျောပွထားခဲ့ပါတယ်။ ကစနစ်တကျအခွအေနေခဲ့ကြောင်း, 1909 နှင့် 1910 အကြား sarcoidosis အတွက် uveitis ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်, နောက်ပိုင်းတွင် 1915 ခုနှစ်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည်ဒေါက်တာ Schaumann ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကို Sarcoidosis ဖြစ်ပေါ်စေသည်?
sarcoidosis ၏အတိအကျကိုအကြောင်းမရှိလူသိများမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ဝေး sarcoidosis ထွက်လာပါတယ်မျှတစ်ခုတည်းအကြောင်းမရှိဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ကောင်း, မျိုးဗီဇသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကူးစက်ရောဂါအချက်များတစ်ရှားပါးပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေကိုအချို့မိသားစုများအတွက် run ဟန်ပါဘူး။
SarcoidosisUK သည့်အကြောင်းရင်းများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းကိုရှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်ဦးဆောင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းပိုမို Read SarcoidosisUK ရဲ့သုတေသန.
ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အရေအတွက်ကို sarcoidosis ၏အကြောင်းတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်တောင်းဆိုနှင့်သင်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းရောင်းပါလိမ့်မယ်။ အမြဲတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာကုထုံးမစဉ်းစားမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Sarcoidosis ကိုယ်ခန္ဓာ၏နီးပါးမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အတွက်အဆုတ်နှင့်အတုံးမှာတက်စေ့ဂလင်း sarcoidosis နှင့်အတူ910 အတွင်းလူနာထိခိုက်, အများဆုံးပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။
အဆစ်, ကြွက်သားများနှင့်အရိုးတို့သ 1 မှ5အတွင်းလူနာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ အာရုံကြောနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့် ပတ်သက်. 1 20 လူနာများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 1 50 အတွင်းလူနာအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။
sarcoidosis ၏ရောဂါလက္ခဏာများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းထိခိုက်နစ်နာဖြစ်သောပေါ်မူတည်သည်။ သူတို့ကပါဝင်နိုင်ပါသည်:
မျက်နှာများ၏ထုံသို့မဟုတ်အားနည်းခြင်း, လက်နက်, ခြေထောက်
sarcoidosis နှင့်အတူလူနာငြီးငွေ့ခြင်းနှင့် lethargic ခံစားရကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်အဖျားနှင့်ညဘက်ချွေးအတူခံရပေမည်။
တစ်ခါတစ်ရံ sarcoidosis ၏ရောဂါလက္ခဏာရုတ်တရက်စတင်ကြာရှည်ပါဘူး။ သည်အခြားလူနာမှာရောဂါလက္ခဏာတွေတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်။
အချို့လူများကအားလုံးမှာမဆိုရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးများနှင့်သူတို့တစ်တွေလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရင်ဘတ်က x-ray သို့မဟုတ်အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိခြင်းပြီးနောက် sarcoidosis ရှိကိုပြောသည်နေကြသည်။
ဘယ်လို Sarcoidosis ရောဂါသလဲ?
လက္ခဏာများအခြားရောဂါများနှင့်ဆင်တူဖြစ်သောကြောင့် Sarcoidosis ရှာဖွေရေးမှာရန်ခက်ခဲသည်။ sarcoidosis ရှာဖွေရေးမှာရန်မတစ်ခုတည်းစမ်းသပ်ရှိပါသည်။
သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကအသေးစိတ်သမိုင်းနှင့်စာမေးပွဲ sarcoidosis ဖော်ထုတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကထိခိုက်စေခြင်းငှါအရာသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းကိစ္စတွင်မူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ဆရာဝန်သင့်သွေးဆဲလ်တွေ, ကယ်လစီယမ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ် function ကိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစသင့်ရဲ့အဆုတ်စစျဆေးဖို့သင်တစ်ဦးအသက်ရှူစမ်းသပ်အပ်သဖြင့်, နှလုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်ကြသည်။
သွေးနှင့်ဆီးစမ်းသပ်မှု သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သင့်ရဲ့ကျောက်ကပ်နဲ့အသည်း function ကိုနှင့်သင့်ကယ်လစီယမ်အဆင့်ကိုစစျဆေးဖို့, အခြို့သွေးနှင့်ဆီးစမ်းသပ်မှုရောင်ရမ်းခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ရှုဖို့စီစဉ်ပေမည်။ သူတို့ကအစတခါတရံ sarcoidosis နှင့်အတူလူနာမှာကြီးပြင်းသော angiotensin-converting အင်ဇိုင်း (ACE အား) လို့ခေါ်တဲ့သင့်ရဲ့သွေးထဲမှာနေတဲ့အမှတ်အသား, စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ထမြောက်တော်မူ ACE အားအဆင့်ဆင့်သေချာပေါက်သို့သော် sarcoidosis ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြကြဘူး။
အဆုတ် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သင့်ရဲ့အဆုတ်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါသံသယရှိဆိုရင်သူတို့ကများသောအားဖြင့် spirometry စမ်းသပ်မှုများနှင့်အဆုတ် function ကိုစမ်းသပ် (PFT) အမြားဆုံး, တစ်ဦးရင်ဘတ်က x-ray သို့မဟုတ်မှန် CT scan နဲ့အသက်ရှူစမ်းသပ်မှုစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။
စကင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကိုလည်းထိခိုက်စေခြင်းငှါသင်တို့မူကားမဆိုရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မပြုစေခြင်းငှါသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာ (မှန် CT မှန် CT scan scan သို့မဟုတ်ပေ) ပုံရိပ် Scan ဖတ်စီစဉ်ပေမည်။ အဆိုပါနှလုံးတစ်ခု electrocardiogram (ECG) သို့မဟုတ် echocardiogram (ပဲ့တင်သံ) သုံးပြီးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေနိုင်ပါသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည် Scan ဖတ်ဆိုင်းဘုတ်များသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းအဖြစ်တစ်ရှူးအတွက် granuloma ကိုရှာပါလိမ့်မယ်။
ခန္ sarcoidosis တစ်ဦးနှင့်ရောဂါရစေနိုင်ရန်အတွက်တစ်ရှူး (ခန္) ၏နမူနာရောင်ရမ်းခြင်း (granuloma) ၏ဒေသများ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
sarcoidosis ခန္ဓာကိုယ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်အတိုင်း, သင်တို့၏သမားအဖြစ်ကောင်းစွာသင်ပြီးတဲ့နောက်ကြည့်ဖို့ (sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်အထူးပြုသူ) နဲ့အခြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကိုမေးလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Outlook နဲ့
Sarcoidosis အများဆုံးလူနာကောက်ကာငင်ကာဖြေရှင်း။ အခြားသူတွေမှာတော့အခြေအနေကိုဆက်လက်ရှိစခွေငျးငှါပေမယ့်ကုသမှုကိုမလိုအပ်ပါဘူး။
ရောဂါ၏တစ်ဦးထက်ပိုလေးနက် '' နာတာရှည် '' ပုံစံဖွံ့ဖြိုးဘူးသောလူနည်းစုအတွက် ပို. ရန်လိုခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကုသမှုတခါတရံလိုအပ်ပါသည်။
လူနာ 7% (ဒီကိန်းဂဏန်းကျယ်ပြန့်သည့်ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာလူဦးရေနှင့် sarcoidosis အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်) sarcoidosis ကနေသေဆုံး - 1 အကြား။
တခါတလေလူနာ '(အိုးပေါကျကှဲ-Up') ရောဂါလက္ခဏာရုတ်တရက်ဆိုးရွားရစေခြင်းငှါ '' ။ ဤသည်စိတ်ဖိစီးမှု, နာမကျန်းသို့မဟုတ်မှတ်မိဘာမျှအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျကျန်းမာကိုစားသေချာအောင်လုပ်ပါ, ကိုယ့်ကိုယ် PACE, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုစကားပြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်။ sarcoidosis လူနာအာဟာရနှင့်အစားအသောက်ကသူတို့အခွအေနေကိုကူညီနိုင်ပုံကိုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များချင်သည်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ SarcoidosisUK ဒီအရေးပါသောနှင့်ရှုပ်ထွေးပြဿနာကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန် - ငါတို့သည်အလွန်မကြာမီဤ website မှတဆင့်ပိုပြီး evidenced အာဟာရလမ်းညွှန်မှုပေးဖို့ရည်ရွယ်ထား။ ကျေးဇူးပြု အဆက်အသွယ် SarcoidosisUK ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ခံမှုသည်။
sarcoidosis အဘို့အဘယ်သူမျှမလူသိများရောဂါပျောက်ကင်းရှိပါသည်။ ဒီရောဂါလူနာတစ်ဝှမ်း 60% အတွက်ဆေးဝါးဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်ပဲပထမဦးဆုံးလအနည်းငယ်အဘို့အသငျသညျစောင့်ကြည့်ဦးမည်ကွောငျးတှေ့နိုငျသညျ။
ကုသမှု 1) ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုပျက်ကွက်၏စိုးရိမ်ရေမှတ်၌နေသောလူနာတွေအတွက်တစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်နှင့် / သို့မဟုတ် 2) အသက်တာ၏အရည်အသွေးသိသိသာသာချို့ယွင်းခံစားရသည်။ တခါတရံမှာရိုးရှင်းသောကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (ဥပမာနဲ့ Ibuprofen အဖြစ် paracetamol သို့မဟုတ် Non-တီးရွိုက် Anti-inflammatory) ကိုရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
Corticosteroids ဘေးဒဏ်သင့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအတွက်ရောင်ခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် sarcoidosis ဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုကြသည်။ ဤရွေ့ကားကိုယ်ခံစွမ်းအားဆေးဝါးများအဖြစ်လူသိများကြသည်။ အသုံးအများဆုံး corticosteroid prednisolone (USA တွင် prednisone) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကတက်ဘလက်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတစ်ခုသို့မဟုတ်သွေးကြောများမှတဆင့်မြင့်မားထိုးမှာပေးထားနိုင်ပါတယ်။ prednisolone နှင့်အတူကုသမှုမကြာခဏအနည်းဆုံး6မှ 24 လကြာလိုအပ်ပါသည်။
တခါတရံမှာ corticosteroids ထိရောက်သောဖြစ်, သို့မဟုတ်အလေးအနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်သင်နှင့်အတူ, Steroid တစ်မျိုးကုသမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားဆွေးနွေးရန်သင့်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုအဓိကဖြစ်နိုင်သည်နှင့်သွေးပေါင်ချိန်, ဆီးချို, အရိုးပွရောဂါ, ကိုယ်အလေးချိန်, နှင့်ကွိတျပါဝငျနိုငျပါသညျ။
Immunosuppressant ဆေးဝါးများအတွက် Steroid တစ်မျိုးထိုးလျှော့ချရန်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာမူးယစ်ဆေးအဖြစ်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ဖြစ်စေ, ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤဆေးဝါးများအများဆုံး Methotrexate, Azathioprine သို့မဟုတ် Mycophenolate ဖြစ်ကြသည်။
sarcoidosis ၏နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများသောအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရှားပါးကိစ္စများတွင်အချို့သောလူနာအောက်စီဂျင်နှင့်သို့မဟုတ်အဆုတ်အစားထိုးလိုအပ်ပါတယ်။ အညီအမျှခဲ, နှလုံးဖို့ဒါမှမဟုတ်အနီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု pacemaker သို့မဟုတ်အခြားကုသမှုလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်စိကိုနှင့်အသားအရေ sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်ကြသောအခါကတခြားကုသမှုကိုလည်းလိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ sarcoidosis ၏တိကျသောအမျိုးအစားများများအတွက်ကုသမှုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အထက် menu ကိုသုံးပြီးတိကျတဲ့စာမျက်နှာများကိုစစ်ဆေးပါ။
သငျသညျအသားအရေ sarcoidosis ရှိပါသလား Erythema Nodosum, Lupus Pernio နှင့်တွေ့ရှိရပါသည်ဘုံနိမိတ်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်။
sarcoidosis လူနာထက်ဝက်ခန့်မျက်စိရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားရသည်။ sarcoidosis မျက်စိထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ။
Sarcoidosis အာရုံကြောစနစ် (neurosarcoidosis) ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုဖတျရှုဖို့အောက်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Sarcoidosis ဟာအဆုတ်အတွက် sarcoidosis ၏ရလဒ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်စိတျနှလုံးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာပိုပြီးအချက်အလက်ဖတ်ပါ။